Piraty an-tserasera Tiorka no milaza ho nahasovoka ny kaonty Instagram mpitondra fanjakana ambony rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2016 11:21 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Italiano, Ελληνικά, English
Mpisovoka manondro tena ho vondrona tiorka “Börteçine Siber Tim” no naka fifehezana nandritra ny ora maromaro ny kaonty Instagram an'i Nikolai Nikiforov, Minisitry ny Serasera androany maraina, namoaka sary am-polony eo ho eo ahitana ny sarin'ny saina tiorka, sarin'ny voromby mianjera, ary manasohaso ireo miaramila tiorka fanta-daza. Navoaka ireo sary ireo miaraka amin'ny soratra amin'ny teny tiorka sy anglisy. (Voafafa ireo sary ireo rehefa niditra an-tsehatra ny Instagram.)
Pikantsarin'ny kaontin'i Nikirorov ao amin'ny Instagram voasompatra. Image: Tjournal.ru
Talohan'ny nahazoany indray ny fifehezany ny kaontiny dia nitaraina tao amin'ny Vkontakte, tambajotra sosialy rosiana malaza indrindra i Nikiforov, nilaza fa tsy mbola namaly ilay fisovohana hatrany ny Instagram, ora sivy taorian'ny nanaovany fanamarihana voalohany tamin'ny antokon-draharaha:
Mankasitraka ny rehetra tamin'ny famaliana mavitrika ny fisovohana ny kaontiko Instagram. Indrisy moa fa tsy mbola namaly tamin'ity raharaha ity ny Instagram, na dia efa mihoatra ny sivy ora aza izany ankehitriny.
Taorian'ny tranga androany dia lasan'eritreritra amin'ny fiarovana ao amin'ny Instagram aho raha oharina amin'ny servisy hafa, sy amin'ny halakin'ny fanohanana ara-teknikany.
Tamin'ny faramparan'ny volana desambra ny vondrona mpisovoka tiorka “Ayyıldız” no nanambara fa eo am-piomanana ny fanaovana fanafihana an-tserasera amin'ny tranonkala rosiana. Nilaza ihany koa io vondrona io fa efa maka fahana amin'ny fisovohana ny tranonkalan-tserasera iraisana an'ny “Anonymous”, ary miampanga io voatonona farany io ho manimbazimba ny fanjakana tiorka. Nilaza ny Ayyıldız fa ny tranonkala rosiana no manaraka noho ny fanimbazimbana nataony tamin'i Torkia ihany koa.
Nihahenjana ny toe-draharaha teo amin'ny Ankara sy Moskoa taorian'ny nandabohan'ny tafika an'habakabaka tiorka ny voromby rosiana mpiady teo akaikin'ny sisintany syriana tamin'ny 24 Novambra. Nilaza i Ankara fa nanitsakitsaka ny faritra habakabaka Tiorka ilay voromby, ary tsipahin'i Moskoa marindrano izany.
Tamin'ny faramparan'ny volana desambra dia navoakan'ny fikarohana nataon'ny mpanadihady fampitambaovao antsoina hoe Medialogia fa mampirona kokoa an'i Torkia ho fahavalo mandrahona indrindra, mihoatra noho i Okraina nai Etazonia ireo tambajotram-pahitalavi-pirenena rosiana. Nandritra ny taona 2015, ohatra, ny isan'ny nanamarihana an'i Torkia hifandraika amin'ny fampihorohoroana dia nitombo avy amin'ny in-20 nankany amin'ny in-150 isan-kerinandro amin'ny ankapobeny.
18 ora izayBangladesh
7 andro izayBelarosia